राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का भन्छन् – जीवन नै क्रिकेटमा समर्पण गरेपछि म ‘क्रिकेट सङ्घको नेतृत्वमा जानसक्छु’ – Etajakhabar
राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का भन्छन् – जीवन नै क्रिकेटमा समर्पण गरेपछि म ‘क्रिकेट सङ्घको नेतृत्वमा जानसक्छु’
नेपाली क्रिकेटको उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा सारथि बनेका कप्तान पारस खड्काले सक्रिय खेल जीवनपछि आफू क्रिकेट प्रशासनको नेतृत्व तहमा र परिस्थितिले साथ दिएमा राजनीतिमा पनि जानसक्ने बताएका छन्। तर केही समय आफू खेलाडीकै रूपमा सक्रिय हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
के यी लगनशील कप्तानको अबको लक्ष्य नेपाल क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष बन्नु हो? स्पष्ट वक्ताको रूपमा परिचित खड्का भन्छन्, “अब बन्ने सङ्घ वा बोर्डमा यस्ता मान्छे आउनु पर्‍यो जो क्रिकेटको विकासमा समर्पित होओस्। भोलिका दिनमा त्यो म पनि हुनसक्छु।”
खेल जीवनपछि प्रशिक्षण भन्दा प्रशासन आफ्नो रुचि रहेको तर क्रिकेट प्रशासनको संरचना कठिन रहेको उनको बुझाइ छ। तीस वर्षीय खड्का भन्छन्, “खेल्नुभन्दा प्रशासन गाह्रो छ भन्छन्। जिल्लाबाट आउनुपर्‍यो। जित-हारको कुरा भयो, राजनीति पनि हुने भयो। तर जीवन नै क्रिकेटमा समर्पण गरेपछि म कुनै न कुनै रूपमा क्रिकेट प्रशासनमा हुनेछु।”
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीबाट प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा हाल नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व उनैले गर्दै आएको देखिन्छ। उनी अहिले मैदानभित्र कप्तान हुन् भने बाहिर राष्ट्रिय टोलीका एक छनोटकर्ता हुन्। उनी आईसीसीसँग पत्राचार गर्ने अघोषित समन्वयकर्ता हुन्।
विदेशी क्रिकेट टोलीहरूले उनीसँग छलफल गर्ने गरेको बताइन्छ। के उनी नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन्?
खड्का भन्छन्, “म जिम्मेवार स्थानमा छु। एउटा खेलाडीको रूपमा राम्रो खेल्नु मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो। तर क्रिकेट विकासको लागि आउने कुनै पनि काम गर्न म पछि हट्दिनँ। त्यो म इमान्दार भएर पूरा गर्न तयार छु, गरिरहेको छु।” यद्यपि अहिलेको मुख्य काम भनेको राम्रो खेल्नु नै रहेकोमा उनको जोड छ।
त्यसबारे उनी भन्छन्, “अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो आलोचना नहोला भन्न सकिन्न। मैले गरेको काम सबै राम्रो नै होला भन्न नसकिएला। त्यसमा सच्याउन सकिन्छ। तर मैले आजसम्म नेपाली क्रिकेटबारे कुनै गलत निर्णय गरेको छैन, गर्ने पनि छैन।”
उनी सन् २००९ देखि नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा कप्तानीको भूमिकामा छन्। खेलमै आफू रमाइरहेको भन्दै उनी थप्छन्, “जसरी भरखरै हामीले अन्तिम बलमा नेदर्ल्यान्ड्ससँग जित्यौँ – जसरी डिभिजन २ को अन्तिम समयमा करण केसीले क्यानडाविरुद्ध खेल जिताए, जसरी पपुवा न्यूगिनीसँगको खेलमा दीपेन्द्र ऐरीले अर्धशतक बनाएर वा जसरी एकदिवसीय मान्यता पायौँ। यी सबै क्षणहरूमा म बढी रमाउने गर्छु।” भूतपूर्व कप्तान इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त दिँदै के उनी पनि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्लान् भन्ने प्रश्नबारे खड्का त्यो परिस्थितिमा भर पर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “पहिले म मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेर त्यहाँको वातावरण क्रिकेटमय बनाउन चाहन्छु। अभिभावकहरूले छोराछोरीलाई ‘क्रिकेटर बन’ भन्ने अवस्था आओस् भन्ने मेरो इच्छा हो।” “त्यो सब गरिसकेपछि परिस्थितिले दिन्छ भने ह्वाई नट पोलिटिक्स?” बिबिसी नेपाली
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २४, २०७५ समय: १४:०९:१९
नेपाल एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटबाट बाहिरियो, वर्षाले बगाइदियो विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपालको सपना
पोर्टोलाई हराउदै इंग्लिस क्लब लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा
पूरा भयो नेपालको सपना : नेपाली वैज्ञानिकले बनाएको नेपालको पहिलो भूउपग्रह प्रक्षेपण भयो , नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश
युभेन्टसमाथि सानदार जित निकाल्दै आयाक्स युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश
इण्डियन प्रिमियर लिगमा राजस्थान रोयल्सलाई किंग्स इलाभेन पञ्जावले १२ रनले हरायो
मेस्सीको २ गोलले युनाइटेडमाथि बार्सिलोनाले निकाल्यो शानदार जित , प्रवेश गर्यो सेमिफाइनलमा
आईसीसी यू–१९ विश्वकप छनोटमा नेपालको बिशाल जित ,ओमान १५० रनले हार्यो
इन्डियन प्रिमियर लिगमा एमरर्जिङ प्लेयर अवार्डको दावेदार खेलाडीमा परे नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने